Shiinaha Xalaal Gelatin warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Xalaal Gelatin waxaa loo isticmaali karaa in lagu xasiliyo, wakiilka xumbada, dhumucda iyo lagu dabaqi karo warshadaha kala duwan ee cuntada sida macmacaanka, macmacaanka, cabitaanka qabow, jellies, jellies, cabitaannada, sausages, alaabta qasacadaysan, samaynta khamri, sharaxa, waxyaabaha hilibka, warshadaha soo saarka caanaha iyo cuntada.
Budada xalaal gelatin waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo cunnooyinka macaan ee nolol maalmeedka sida maraq qaro weyn, hilib la qaboojiyey, saladh, iyo sino.
Xalaal Gelatin waa nooc ka mid ah cuntada leh kolestarool badan. Cunista ka dib, dadka kama cayilayso, mana u horseedi doonto hoos u dhac jidheed. Gelatin sidoo kale waa colloid difaac adag leh awood emulsifying xoog leh. Waxay xakameyn kartaa xinjirowga caanaha, caanaha soybean iyo borotiinnada kale ee ay sababaan gaaska caloosha ka dib markay galaan caloosha, taas oo ku habboon dheefshiidka cuntada.
Xalaasha gelatigu waa midab cad ama midab huruud khafiif ah leh, macmacaan dhalaalaya ama dhalaalaya ama budo ah, udgoon badan oo aan dhadhan lahayn Laguma milmi karo biyaha qabow, laakiin wuxuu dhuuqi karaa 5 jeer qadarka biyaha qabow waana jilcin karaa. Ku milmi biyaha kulul oo samee jel ka dib qaboojinta. Waxay ku milmi kartaa xalka aqueous acid acetic, glycerol, propylene glycol iyo polyols kale. Lagama dhexqaadi karo ethanol, ether, chloroform iyo inta badan dareerayaasha kale ee nonpolar.
Hore: Kaluun Gelatin
Xiga: Gelatin Bovine